Amuuraha Islaamka: Fatwada Ictisaam & Fikirka Shabaab
Sh. Bashiir Salaad
Urur-diimeedka Ictisaam, oo ah ururka uu u xuub-siibtay ururkii Al-Itixaad, ayaa shir ay dhawaan ku yeesheen magaalada Garoowe, waxay ku cambaareeyeen gaaleysiinta Muslimiinta, is-miidaaminta iyo Jihadka. Laakiin al-Shabaab ayaa culimada ku sifeysay kuwa baadi ah.
Toddobaadkii hore, magaalada Garoowe waxaa shirweyne ku yeeshay qaar kamid ah culima’uddiinka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku abtirsada ururka Ictisaam, oo ah ururka uu u xuubsiibtay ururkii al-Ittixaad.
Sh. Bashiir Salaad, oo kamid ahaa qabanqaabiyayaashii shirkaas, ayaa ii sheegay in shirku uu laba ujeeddo lahaa. Waa marka horee, wuxuu ahaa kulan ay xubnaha Ictisaam uga arrinsanayeen aayaha ururkooda, iyo hadafka labaad oo ahaa in qiimeyn diimeed lagu sameeyo colaadda diinta ku saleysan ee ka aloosan Somalia.
Sh. Bashiir ayaa iiga warramay aragtida diiniga ah ee ay culimadii kulantay soo saareen.
Ka sokow mas’alada Jihaadka, Sh. Bashiir wuxuu kaloo ii sheegay in culimada ururka Ictisaam ay si qoto-dheer uga doodeen mas’alada is-gaaleysiinta.
Aragtidaas waxaa markiiba gaashaanka u daruuray Sheikh Jaamac C/salaam, oo kamid ah culimada ugu firfircoon ururka Ictisaam. Sheikha, ayaa Jimcadii hore isaga iyo madaxa diin-faafiska ee ururka al-Shabaab, Fu’ad Shangole, waxay khudbado dhaadheer ku cambaareeyeen culimadii Garoowe ku shiray, iyagoo sheegay inaysan fahamsaneyn xeerarka ay Diinta Islaamku ku qodobtay is-gaaleysiinta, is-miidaaminta iyo Jihaadka.
Sh. Jaamac C/salaam ayaa ku andocooday in culimada ku shirtay Garoowe ee Ictisaamku ay fikir ahaan Murji’o yihiin. Murji’adu waxay aheyd koox ka hortimid Muslim-gaaleystiintii Khawaarijta, qarniyadii hore ee Islaamka, wuxuuna fikirka Murji’adu ku saleysnaa in gaalnimada iyo Islaannimada dhabta ah ee qofka bani’aadamka ah uu Alle uun ka go’aan ka gaari karo, halka Khawaarijtu ay ka ahaayeen koox sheegata inay iyagu yaqannaan, oo go’aan ka gaari karaan astaamaha uu qofku Diinta Islaamka uga bixi karo.
Sh. Bashiir Salaad ayaan weydiiyey inuu jawaab ka bixiyo cambaareynta ba’an ee uu soo jeediyey Sh. Jaamac C/salaam, oo muddo dheer ay iskula jireen Al-Ittixaad iyo Ictisaam, walibana kamid ahaa culimadii sanadkii hore ku shiray Muqdisho, ee soo saaray Fatwo ay ku rajeynayeen inay baajiso dagaallada ka dhex qarxay dowladda iyo kooxo diimeedyada la dirirsan.
Ugu dambeyntii, waxaan Sh. Bashiir Salaad weydiiyey bal inay qaadayaan iyo inkale tallaabada ay farayo Qur’aanka Kariimka ah, ee ah in haddii ay Muslimiintu farta ku wada-fiiqaan koox loo aqoonsaday masloxo diid, in meel looga soo wada-jeesto kooxdaas oo si wadajir ah loola dagaallamo, Sheekhu wuxuu sheegay in taladu dadka oo dhan u taallo.
Si kastaba ah ahaatee waxaa la isweydiin karaa inta ay talo iyo aragti isweydaarsi sugi karaan shacabka dhiiggooda lagu banneysanayo magaca Diinta Islaamka.